Free Software dị ka onye dị irè State Ọha N'uba | Site na Linux
Ugbu a na «Estados» na-eme ihe ike nke «Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)» ime ka gi «Gobiernos» na ụzọ ha si achịkwa, usoro ọrụ ọha na eze ma rụọ ọrụ nke ọma, ọtụtụ ugboro n'okpuru atụmatụ a maara dị ka «Gobierno Electrónico» y «Gobierno Abierto».
N'ime ọchịchị a ije na a zuru ụwa ọnụ ọnụ ọgụgụ, ndị «Software Libre» nwere ihe dị mkpa, ọ bụghị naanị site na mmezi nke ngwa ngwa na ụzọ nghọta karịa nke ime ihe, kama site na nchebe na nzuzo n'usoro nke «Seguridad de la Información».
1 News nke Free Software na Gọọmentị
2 Nkọwa ndị metụtara ya
2.3 Meghee ọchịchị
2.4 Gọọmenti Kọmputa
2.5 Ọchịchị ọha
3 Uru nke sọftụwia efu dị ka amụma ọha na eze
News nke Free Software na Gọọmentị
Taa, enwere ike ikwuputa ya nke oma na «Software Libre», bụ ihe na-agakarị n'ofe «Informática y la Computación» ma ọ bụ nke «Tecnología» n'ozuzu Ya mere, ọ na-eburu ebum n'uche ya gaa na mpaghara ndị ọzọ ma ọ bụ akụkụ nke mmetụta ma ọ bụ ndụ, na-akpata, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nnwere onwe na nghọta a ga-etinyekwu n'uche na ngalaba ndị jibu emegide echiche ma ọ bụ ụkpụrụ dị otú ahụ.
Ngalaba dịka gọọmentị, na ugbu a na-achọ ịgakwuru ụmụ amaala ha dị iche iche iji nye ha ohere ịmara ihe na-eme na mpaghara ha njikwa ọha na eze, n'ụzọ doro anya, ikere òkè, mmekọrịta, ịnweta, nke bara uru na nke teknụzụ.
Karịsịa, gịnị kpatara ya Mgbe ha na-arụ ọrụ ha na mmejuputa iwu ha, States na-achọkarị nke ahụ «Desarrollos de Software» mezuo ihe ụfọdụ achọrọ, Na ugboro ugboro ọtụtụ n'ime ha na-eduga naanị «Software Libre» iji mee ka mmepe nke onwe ha nwee ike.
Eziokwu, nke a na-eche ugbu a, na mba ụfọdụ mepere emepe ma na-emepe emepe, ebe eji «Software Libre» emebela ka a «Política Pública de Estado» ma maka kọmputa nke ndị ọrụ nhazi, yana maka ntọala nke nyiwe teknụzụ ha (Data Center: Servers and Systems). Nke abawanyela «Soberanía Tecnológica» nke ụfọdụ, ma melite ogo ha na mpaghara «Seguridad de la Información».
Nkọwa ndị metụtara ya
Ọchịchị bụ ntọala nke ụlọ ọrụ nwere ikike na ikike iji guzobe usoro na-achịkwa ọha mmadụ, nwere ikike nke ime na nke mpụga na mpaghara enyere.
Gọọmentị bụ ikike nke na-eduzi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye ọrụ ya bụ ijikwa ma jikwaa steeti na ụlọ ọrụ ya, jiri ikike na ịhazi ọha mmadụ.
Ọ bụ paradaịs ọhụrụ na ụdị mmekọrịta dị n'etiti ndị ọchịchị, ọchịchị na ọha mmadụ. Uzo ozo di iche iche, ndi mmadu, ndi oru aka nke ndi mmadu choro itinye aka na ha, ma na nlekota na ime mkpebi ndi mmadu, iji kpalite, kwuputa ma meputa uru ndi mmadu site na karia ala nke ndi isi ochichi. Ihe nlere anya nke putara ihe ndi ozo nke ndi mmadu na ibe ha, nke mere na ya onwe ya na akwalite ma gbanwee omenala nke mgbanwe n'ime echiche, njikwa na inye ndi oru ochichi.
Managementdị njikwa gọọmentị gụnyere itinye ICT n'ọrụ nke ngalaba ọha, na ebumnuche nke ịnye ụmụ amaala ọrụ ka mma yana ịbawanye arụmọrụ, nghọta na itinye aka nke ụmụ amaala.
Ọ bụ usoro mmemme (mmemme, atụmatụ, usoro, iwu, ụkpụrụ) nke Steeti / Gọọmenti na-eduzi maka mmezu nke ebumnuche ọha na eze ma ọ bụ nke mpaghara. A na-eme ọrụ ndị a ka ọ na-agbakọkọta ogologo oge iji hụ nsonaazụ ya.
Uru nke sọftụwia efu dị ka amụma ọha na eze
Nye aka na iwusi ike nke Nnwere Onwe Teknụzụ
Mee ka ụkpụrụ dị na ngalaba nke Nchekwa Ozi Ọchịchị.
Melite ndakọrịta na mmekọrịta nke sistemụ Ozi jisiri ike.
Kwadoro ịnweta ụwa ogologo oge maka ụmụ amaala.
Ọma chebe Digital Heritage
Zụlite ohere maka uto na mmepe obodo na ihe gbasara teknụzụ.
Nweta ego nchekwa ogologo oge na ikikere ngwanrọ, ndozi na mmelite.
N'etiti ndị kasị mkpa.
Na nchịkọta, ojiji nke «Software Libre» dị ka a «Política Pública de Estado», Ọ bụghị naanị a ajụjụ nke ejiji ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụ isi mmewere maka owuwu nke ugbu a abụrụ ụdị nke «Gobierno (Abierto y Electrónico)» n'ụzọ dị ka ụmụ amaala nwere obi ike na ha na-agbaso usoro eji eme ihe kwesiri ntukwasi obi, maka onye ọ bụla.
Na na n'ihi na nke a ga-rụrụ, ọ na-achọ mgbe niile na-enweghị obi abụọ, ihe nkwado nke kachasị «altas instancias decisorias de un país», nke mere na nke a na-arụ ọrụ dị ka moto iji bido atụmatụ ndị dị mkpa na «Políticas Públicas de Estado» dabere na ojiji nke «Software Libre» na echiche ya.
Ya mere, na n'aka nke ya, usoro ndị sochiri, site na iwu, ọrụaka na arụmọrụ (ndị ọrụ nchịkwa na ụmụ amaala) na-agbaso usoro ahịrị ma site na mgbakota aka mee ka ebe kacha mma maka mmepe n’ihe a ru, karisia maka uru nke «Seguridad de la Información», nke taa na-echegbu anyị nke ukwuu.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgụ otu isiokwu na-adọrọ mmasị si mba ọzọ metụtara isiokwu ahụ, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ nke a nke Richard Stallman. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbasa isiokwu ahụ ntakịrị n'ime Blog anyị, anyị na-akwado isiokwu ndị na-esonụ: Nkeji edemede, Nke abụọ, Isiokwu nke atọ y Ihe nke anọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Free Software dị ka onye dị irè State Ọha N'uba
Linus Torvalds na-ahọrọ ọkọlọtọ Linux na Gnome na KDE nwere ike ibute nke a